Ny iOS 15 sy ny watchOS 8 dia hamela antsika hametraka vaovao farany miaraka amin'ny fitahirizana tsy dia misy | Vaovao IPhone
Ny iOS 15 sy ny watchOS 8 dia hamela antsika hametraka fanavaozana miaraka amin'ny fitehirizana tsy dia misy firy
Omaly dia namporisihina i Apple handefa ny beta fahatelo an'ny iOS 15, kinova fitsapana izay manohy ny tahan'ny famoahana (isaky ny 2 herinandro) ka mandritra ny volana Ny volana septambra dia afaka mankafy ny kinova miorina amin'ny iOS 15 isika. Saika tsy misy vaovao intsony, toa ny dikan-teny marin-toerana izay tonga hanatsara ny lesoka tamin'ny beta teo aloha an'ny iOS 15. Taorian'ny famoahana dia efa fantatrao fa maro ny mpamorona manolo-tena handinika ny pitsopitsony kely rehetra manafina ny kinova vaovao. Izao ity vaovao ity iOS 15 Beta 3 dia mitondra antsika ny fahafahana manavao ny fitaovantsika manana fahafaha-misafidy kely kokoa amin'ny fitaovantsika.
Misy zavatra liana tokoa satria ny sasany dia manana 500 MB mihoatra ny XNUMX MB izay ilaina mandritry ny fanavaozana. Tokony ho hitantsika raha toa ka azo apetraka ireo, fa araka ny hitantsika amin'ireo fanamarihana fanavaozana, afaka manao fanavaozam-baovao isika na dia tsy manana tahiry 500 MB kely aza ny fitaovantsika, zavatra azo ampiharina amin'ny iPhone, iPad, ary amin'ny Apple Watch.
Raikitra amin'ny watchOS 8 / iOS 15 beta 3: izao dia azonao atao ny manavao ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lozisialy raha latsaky ny 500MB fitehirizana azo. (78474912)
Araka ny hitanao izao Tsy mazava ny habetsaky ny fahafahantsika hanana izany fa ny marina dia tsy voafetra ho 500 MB intsony ny fahafahantsika misafidy isika amin'ny fitaovantsika. Zava-baovao mahaliana tsy misy fisalasalana ho an'ny mpampiasa an'i Apple Watch satria tsy dia manana fahaiza-manao ireo, ary somary misy fitarainana vitsivitsy amin'ity olana ity satria maro ireo mpampiasa no tsy afaka nanavao ny fitaovany. Aza adino fa miatrika kinova beta isika, afaka miova ny zava-drehetra manoloana ny fanombohana ny kinova farany, ary eny, raha iray amin'ireo mpitsikilo maniry hitsapa ny betas ianao dia tadidio fa mila mitandrina isika ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Ny iOS 15 sy ny watchOS 8 dia hamela antsika hametraka fanavaozana miaraka amin'ny fitehirizana tsy dia misy firy
Ny fampiasana Windows amin'ny iPad dia azo atao noho ny Windows 365